Ny tsipiriany tsy mety amin'ny sary SEO avy amin'ny Semalt
Nilaza i Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Success of Semalt , fa ny sary dia manolotra fahafahana miavaka ho an'ny fikarohana ary manampy ireo pejinay handefa hafatra manan-danja amin'ny Google, Bing, ary Yahoo. Ny mpikaroka mpikaroka dia mamaritra ny lahatsoratry ny sary ary mifandray amin'ny votoatin'ny tranonkala iray. Tsy mampiseho azy ireo fotsiny ity lahatsoratra ity fa mampiasa azy io ho toy ny loharanom-pitarihana ny maha-zava-dehibe ny toerana manokana - oculos de sol espelhados masculinos. Ny fampidirana ireo sary dia tsotra, saingy tsy tokony hadino ny manatsara ny sary ho an'ireo mpikaroka. Google dia manana tahiry lehibe indrindra amin'ny sary ao amin'ny aterineto. Sary maro samihafa no azo alaina isam-bolana. Ny tranonkala dia manana singa maromaro, ary ny sasany amin'izy ireo dia hita kokoa noho ny hafa. Ny sary dia manampy ny tranonkala iray ho hita kokoa amin'ny valin'ny fikarohana . Ohatra, ny vohikala e-commerce dia tsy mampandefitra ny votoatin'ny kalitao sy ny sarin'izy ireo. Ny tanjona faratampon'ny SEO dia mampiavaka ny tranonkala iray, ary ny sary tsara tarehy dia manampy amin'ny fitadiavana vokatra tsara.
Ireo endrika samihafa amin'ny fanatsarana ny sary amin'ny milina fikarohana:
Toy ny ao amin'ny pejin'ny SEO, ny SEO, ny endrika fanatsarana ny fikarohana sary dia manana endrika samihafa, toy ny sehatry ny fahitana, meta tags, ary loharanon-tsarinao. Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa dia manaiky sary amin'ny alalan'ny fiantsenan'ny fiara sy ny tsipaipika amin'ny artificial, saingy ny mpamily fikarohana dia tsy afaka mamaky ny votoatin'ny sary rehetra. Izany no mahatonga ny fomba hampisehoana ny lahatsoratry ny sarinao ary tokony hifandraika amin'ny lohateninao sy ny dinanao ny marika meta. Ireo singa izay hampiharina amin'ny fanatsarana ny sary dia ny haben'ny rakitra, ny anaran'ny rakitra, ny sary ary ny loharano.
Ny haben'ny ny rakitrao dia hanapa-kevitra ny amin'ny fomba hita maso. Raha te hampiditra haingana ny URL eo amin'ny endritsoratra ianao, dia tokony hiasa amin'ny haben'ny sarinao. Ny sary avo lenta dia tsy mahazo toerana haingana ary mampitombo ny haingam-pandehan'ny tranonkalanao.
Ny anaran'ny rakitrao dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny laharana manaraka. Ataovy azo antoka fa ny anaranao dia maneho ny karazan-tsainao. Ho an'ny Bing, Yahoo ary Google, ny lohateny dia manome teboka lehibe amin'ny fitadiavana ny niche amin'ny tranokalanao.
Ny endriky ny saryo dia tokony ho 4: 3 raha toa ka misimisy kokoa kokoa noho ny format hafa izy.
Tokony haka ny fotoanao ianao ary hanome voninahitra ny tompon 'ilay sary. Mamporisika anao ny hampiasa sary avy amin'ny loharano Getty Images sy Shutterstock.
Raha toa ianao ka te haka sary iray, dia tadidio fa ireo lahatsoratra manodidina ny sary dia manan-danja ary manana teny fanalahidy mety. Ny tags ALT dia tsy maintsy atao amin'ny sary rehetra rehefa mamaritra ny saryo amin'ny fomba tsara kokoa. Ny lohatenin'ny meta dia tokony hosoratana amin'ny teny fanalahidy mety sy manan-danja na ny teny fototra fototra ao amin'ny lahatsoratrao. Ny sary azo ampiasaina dia manampy ny tranonkala hanatsara ny fikarohana ataony. Tsara ihany koa ny mahita ny fahitana bebe kokoa sy ny fahamendrehan'ny pejy web anao ary manome fahafahana ireo mpampiasa jamba mba hianatra ny zava-drehetra momba ny tranokalanao.